Tag: vhidhiyo ecommerce | Martech Zone
Tag: vhidhiyo ecommerce
Chipiri, Gunyana 20, 2020 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Douglas Karr
Mhando dziri kuwedzera kushandisa tekinoroji kugadzira zviitiko zvitsva zvekutenga munguva yekugara-pamba. Uye, panguva imwecheteyo, indasitiri yevaraidzo iri kumanikidzwa kutsvaga dzimwe nzizi dzemari panguva iyo dzimba dzemitambo nenzvimbo dzemimhanzi zvakavharwa. Pinda droppTV, yepasirose-yekutanga kutengesa shopu papuratifomu. Kutaurirana nemavhidhiyo emimhanzi, droppTV inoita kuti vateereri vaone zvemukati pavanenge vachitsvaga zvakamisikidzwa zvitoro zvepop-up kutenga mashoma-edition emumigwagwa. Iyo chikuva inogonesa vagadziri (uye mabhurandi) kuita mari